Akụkọ - Nweta nkwalite mmanụ ụgbọ ala na Ptfe | BESTEFLON
PTFE dị nro nke na -agwụ ike sooks
PTFE tụgharịrị sooks
PTFE sooks nwere ihe mkpuchi mkpuchi
Nweta nkwalite mmanụ ụgbọ ala ka Ptfe | BESTEFLON
Dabere n'ụdị breeki ụgbọ ala dị iche iche, enwere ike kewaa ya na hydraulic breeki hose, homonụ breeki pneumatic na eriri breeki agụụ. Dabere na ihe ya, ekewara ya na sooks breeki rọba, eriri breeki nylon na eriri breeki PTFE.
Roba brek sooks nwere uru nke ike ọdụdọ siri ike na nrụnye dị mfe, mana ọghọm ya bụ na elu dị mfe ịka nká mgbe ejiri ogologo oge mee ihe.
N'ihe banyere obere okpomọkụ, ike tensile nke eriri breeki nylon ga -ebelata, ma ọ bụrụ na ndị agha mpụga emetụta ya, ọ dị mfe imebi
Mana eriri PTFE nwere nguzogide okpomọkụ dị elu, obere okpomọkụ, nguzogide nrụgide dị elu, na -eyi nguzogide, nguzogide corrosion na njirimara ndị ọzọ, ndụ ogologo oge, anaghị achọ nnọchi ugboro ugboro. Ọ nwere ike kwụọ ụgwọ maka adịghị ike nke ihe abụọ ndị ọzọ
Nchedo, ogologo ndụ, na arụmọrụ kwesịrị ibute ụzọ. E85 ma ọ bụ ethanol egosila na ọ bụ mmanụ akụ na ụba na -arụ ọrụ nke ọma nke nwere ike ịnye ọnụọgụ octane achọrọ na ikike ike maka ngwa chọrọ. Mana ihe mgbakwunye na mmanụ ọkụ nke oge a nwere ike isi ike ma mebie ọtụtụ ihe. Nke a nwere ike iduga nfufu nwere ike dị ize ndụ ma nwee ike ịhapụ isi ísì ọjọọ. Ozugbo ahịrị mmanụ ọkụ na -emebi emebi, irighiri ihe na -adịghị mma nwere ike merụọ ma mechie ọwa mmanụ na ọwa carburetor, na -emetụta arụmọrụ yana ịkpata nsogbu.
Ihe ngwọta kacha mma bụ ihe polytetrafluoroethylene (PTFE). PTFE bụ ihe plastik nke kacha dị gịrịgịrị na nke kacha dị mfe nchara mmanụ dị. Ọ na -agwakọta akwa na -agbanwe agbanwe 304 igwe anaghị agba nchara nwere eriri PTFE dị larịị iji mee ka ọ bawanye, na mpụta dị mgbagwoju anya na -enye mgbanwe dị egwu. Ọkụ PTFE dị n'ime dị mma maka iji mmanụ ọ bụla wee nwee ike iguzogide okpomọkụ ruo ogo 260 Celsius. Mmebi nke mmanụ anaghị emetụta ihe ahụ, yabụ na vepo mmanụ anaghị awụpụ
Ndụmọdụ niile maka sistemụ mmanụ ọkụ:
Mgbe ị na -etinye a PTFE sooks n'ụgbọala, dobe akpa mmanụ ọkụ n'ebe ọkụ na -esi, akụkụ dị nkọ na akụkụ na -akpụ akpụ. Na -ekwe ka nkwụsị zuru oke maka ngagharị nke sistemụ ike. Lelee nkwụsị n'etiti nkwusioru na ngwa sistemụ nnyefe. Jide n'aka na ị ga -elele ihe ndị nkwusiri ike n'oge usoro ahụ niile ka ị ghara ịpịcha ma ọ bụ ịgbatị eriri mmanụ. Maka oghere mmanụ ọkụ nke nwere ike ibute irighiri okporo ụzọ na oke okpomọkụ, jiri eriri mmanụ PTFE ejiri igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ waya siri ike wee kechie ya. Hụ na ị ga -ejikọ eriri akpa ike ka ọ ghara ịkpa oke. Jig na -enyekwa aka belata ịma jijiji nke ihe ndị ọzọ. Jiri ihe nkebi kwesịrị ekwesị mgbe ị na -esi na pan
PTFE mmanụ ụgbọ mmiri
PTFE nwere ahịrị
Oge ezipụ: Sep-17-2021
Ozi na usoro ọhụụ nke ụlọ ọrụ anyị yana ihe ọmụma ụlọ ọrụ dị mkpa nke PTFE HOSE.
PTFE mmanụ ụgbọ ala ajụjụ ihe ika na wh ...
Steel ike akara ma ọ bụ Quality PTFE mmanụ ụgbọala akara ...
Okwu: Sijiaolou Mpaghara Mpaghara, Boluo, Huizhou, Guangdong, China
Copyright - 2020-2022: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na -ekpo ọkụ - Map saịtị
ptfe sooro akpa, Mgbagwoju Ptfe gbara gburugburu - 939/939b, 6ngbakọ Ptfe Hose, ptfe sooks, ptfe ntekwasa sooks, PTFE sooks nzukọ,